चीनमा अमेरिकी कूटनीतिज्ञ र कर्मचारीमाथि माइक्रोवेभ हतियारबाट आक्रमण ! – Kavreonline Patra
मुख्य पृष्ठ /International/चीनमा अमेरिकी कूटनीतिज्ञ र कर्मचारीमाथि माइक्रोवेभ हतियारबाट आक्रमण !
काठमाडौँ– चीनमा अमेरिकी कूटनीतिज्ञ र कर्मचारीमाथि माइक्रोवेभ हतियारबाट आक्रमण भएको आशंका गरिएको छ ।
पछिल्ला केही वर्षयता चीन र क्युबामा अमेरिकी दूतावासका कैयौं स्टाफ रहस्यमय तरिकाले बिरामी भएपछि गरिएको जाँचमा माइक्रोवेभ हतियारबाट आक्रमण भएको आशंका गरिएको हो ।
घटनाहरुको जाँचपछि अमेरिकाको नेशनल एकेडेमी अफ साइन्सेजले उनीहरुमाथि माइक्रोवेभ ऊर्जाबाट आक्रमण गरिएको आशंका सबैभन्दा अधिक भएको बताएको छ । सीएनएनको रिपोर्टअनुसार नेशनल एकेडेमी अफ साइन्सेजले आफूले जाँच गरेका केसहरुमा ‘पल्स्ड रेडियो फ्रिक्वेन्सी इनर्जी’को प्रयोग गरिएको संकेत पाइएको बताएको छ ।
रिपोर्टमा सोचविचार गरिएको रणनीति अन्तर्गत माइक्रोवेभ ऊर्जाको प्रयोग गरिएको भनिएको छैन तर आपराधिक प्रकृतिका मानिसहरु यसको पछाडि हुन सक्ने भनिएको छ ।
डाक्टर र वैज्ञानिकहरुको १९ सदस्यीय कमिटीले अमेरिका सरकारको अनुरोधमा यो जाँच गरेको हो । २०१७ मा मार्क लेन्जी नामका अमेरिकी कूटनीतिज्ञ ग्वान्झाउमा तैनाथ थिए । एक दिन उनी रहस्यमय तरिकाले बिरामी भए र उनलाई टाउको दु:ख्न थाल्यो । पद्न पनि समस्या हुन थाल्यो । स्मरणशक्ति कमजोर हुने र निद्राको समस्या पनि सुरु भयो ।
मार्क लेन्जीको एमआरआइ स्क्यानमा उनको मस्तिस्कको २० भागको घनत्व कम भएको पाइएको छ । खासगरी ती भागको घनत्व कम भएको थियो जो स्मरणशक्ति र भावनात्मक विषयसँग सम्बन्धित हुन्छन् । अर्कोतर्फ मस्तिस्कका तीन भागको भने घनत्व बढेको पाइयो । अनुसन्धानकर्ताका अनुसार मस्तिस्कका कैयौं भागको घनत्व कम हुनु ब्रेन इन्जुरीको संकेत हुन सक्छ ।
अमेरिकी अधिकारीहरुमा यस्ता आक्रमण धेरैजसो २०१६ र २०१७ मा भएका थिए । केही केसहरु भने २०१७ पछि पनि देखिएका थिए नेशनल एकेडेमी अफ साइन्सेजले माइक्रोवेभ हतियारका विषयमा चिन्ता जाहेर गरेको छ । विश्वमा माइक्रोवेभ हतियार भएका देशहरु निकै कम छन् । यी देशहरुमध्ये रुसलाई पनि गनिन्छ । क्युबामा अमेरिकी अधिकारीहरु रहस्यमय तरिकाले बिरामी हुनुको पछाडि रुस जिम्मेवार भएको आशंका गरिन्छ ।
मेक्सिकोमा ढल सफा गर्दा भेटिएको मानवभन्दा ठूलो ‘मुसा’ मानिसहरूमा त्रास ( भिडियो सहित )